KUSHINARA NIBBANA BHUMI PAGODA -Free Online Analytical Research and Practice University for “Discovery of the Univerasal Volunteers with the Awareness Universe” (FOARPU4DUVAU) in 117 Classical Languages.
1400 LESSON 29115 THURSDAY FREE ONLINE E-Nālandā Research and Practice UNIVERSITY run by http:sarvajan.ambedkar.org HISTORY of Nālandā Obama warns this Country over religious divisions-SOLUTION Remove this Fraud EVMs at the earliest possible moment else those who suffer from inequality will blow up the structure of democracy which this Constituent Assembly has so laboriously built up.-Course Program Kamma 1-Sakalika Sutta: The Stone Sliver in Classical English,Myanmar(burmese)
Posted by: site admin @ 5:25 pm
1400 LESSON 29115 THURSDAY
FREE ONLINE E-Nālandā Research and Practice UNIVERSITY
Course Program Kamma 1-Sakalika Sutta: The Stone Sliver	in Classical English,Myanmar(burmese),
62) Classical Myanmar(burmese)
62) Classical မြန်မာ (ဗမာ)
1400 သင်ခန်းစာ 29115 ကြာသပတေးနေ့
အခမဲ့အွန်လိုင်း E-နာလန်ဒါသုတေသနနှင့်လေ့ကျင့် UNIVERSITY
ကို http: sarvajan.ambedkar.org
မညီမျှမှုကနေဆင်းရဲခံရသူများသည်ထို Constituent Assembly ဒါကြောင့်ပင်ပန်းတည်ဆောက်ထားသည့်ဒီမိုကရေစီ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုတက်မှုတ်မည်ကိုအခြားအစောဆုံးဖြစ်နိုင်အခိုက်မှာဒီလိမ်လည်မှု EVMs ဖယ်ရှားပါ။
သင်တန်းအစီအစဉ်ကိုအစီအစဉ်ကမ္မ 1-Sakalika သုတ်: Classical အင်္ဂလိပ်ကျောက်ခေတ် Sliver, မြန်မာ (ဗမာ),
ဒီ Google ကဘာသာပြန်အလေ့အကျင့်များနှင့်ပြန့်ပွားဘို့အသင့်အမိ tounge နှင့်သင်သိရှိသမျှသည်အခြားသောဘာသာစကားအတွက်အတိအကျကိုဘာသာပြန်ချက် render နှင့်နောက်ဆုံးနှစ်ဂိုးအဖြစ်ထာဝရ Bliss ရောက်ရှိဖို့ရန် Sota panna (Stream ကတော့ Enter) ဖြစ်လာပါတော့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တစ်ဦး Nut Shell ကိုသတိထားကျင့်တို့နှင့်နိုးထ ONE ၏‘S
- လွယ်ကူတစ်ဦးက7နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်နားလည်ရန်
ဒါပေမဲ့အသက် 70 MAN လေ့ကျင့်ရန်ခက်ခဲ!
Ultimate ဆိုရင်အယူဝါဒ (အဘိဓမ္မာ) ပိဋက၏စည်းကမ်း၏ 1) တင်း (Vinaya), 2) သုတ္တန်၏ (သုတ်) & 3) - TIPITAKA3တောင်းသည်။
ပြီးပြည့်စုံသော Tipitaka 40 volumes ကိုရှည်လျားသည်
နာလန်ဒါ (နာလန်ဒါ; အသံထွက်: /nɑː.lən.ðɑː/;) တစ်ခုထုMahāvihāraရှေးခေတ် Magadha (မျက်မှောက်ခေတ် Bihar ပြည်နယ်) မှာကြီးတစ်ခုကဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ပတ်သက်. 95 ကီလိုမီတာအရှေ့တောင်ဘက်တွင် Patna တည်ရှိသည်, နှင့် C မှပဉ္စမရာစုအေဒီကနေလေ့လာသင်ယူခြင်း၏အလယ်ဗဟိုခဲ့သည်။ 1200 အေဒီ။ သမိုင်းပညာရှင်မကြာခဏတက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ်နာလန်ဒါရုပ်လုံးပေါ်စေ။
နာလန်ဒါတို့သည် Gupta အင်ပါယာ၏မွေးဆရာမွေးအဖြစ်ကိုကောင်းစွာအဖြစ် Harsha တူဧကရာဇ်ဘုရင်နှင့်ပုလဲအင်ပါယာ၏အကြာမှာမင်းအရာရှိအောက်မှာကြီးထွားလာသည်။ အထွတ်အထိပ်မှာကျောင်းကဝေးတိဗက်, တရုတ်, ကိုရီးယား, နှင့်ဗဟိုအာရှအဖြစ်ပညာရှင်များနှင့်ကျောင်းသားများဆွဲဆောင်
နာလန်ဒါ Mahavihara ၏ပျက်စီးယိုယွင်း
တည်နေရာ Bihar ပြည်နယ်
25 ° 08′12 “N 85 ° 26′38” E: 25 ° 08′12 “N 85 ° 26′38“ ECoordinates ကိစ္စများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်
length 800 ပေ (240 မီတာ)
Width ကို 1,600 ပေ (490 မီတာ)
ဧရိယာ 12 ဟက်တာ (30 ဧက)
စတင်တည်ထောင်5ရာစုအေဒီ
စွန့်လွှတ် 13 ရာစုအေဒီ
တူးဖော် 1974-1982, 1915-1937 ဒိတ်
ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များကသည်ဒါဝိဒ်ကို B. Spooner, Hiranand Sastri, JA စာမျက်နှာ, အမ် Kuraishi, G.C. Chandra, N. Nazim, Amalananda Ghosh
public access ဟုတ်ကဲ့
website နာလန်ဒါ (Asi)
Asi အမှတ် N-BR-43
အမည်, နာလန်ဒါဒေသခံတင့်ကားအတွက်တစ်ဦးသည်မြွေ (နာဂ) ၏အမည်ကို (နန္ဒ) ကိုရည်ညွှန်းနာဂနန္ဒကနေရယူခဲ့ပါတယ်။
နာလန်ဒါအစပိုင်းတွင်ထို့နောက် Magadha ၏မြို့တော်ဖြစ်သည့် Rajaguha ၏အနီးအနားမြို့ (မျက်မှောက်ခေတ် Rajgir) ကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့ဟာအဓိကကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းဖြင့်သာယာဝပြောတဲ့ရွာခဲ့သည်။
ဂေါတမဗုဒ္ဓဟာအနီးအနားမှာရှိတဲ့သရက်သီး Pavarika အမည်ဖြင့်မှည့အာရှရပင်နှင့်မိမိနှစ်ခုအကြီးအကဲတပည့်တဦးအတွက်သာရိပုတြာပို့ချချက်ကယ်လွှတ်ကြပြီဟုမိန့်သည်ထိုဒေသတွင်မွေးဖွားဗုဒ္ဓနှင့်အတူနောက်ပိုင်းတွင်မှီနိဗ္ဗာန်ကို there.This ရိုးရာအသင်းအဖွဲ့ tenuously မှာဖို့ရွာ၏တည်ရှိမှုဒိတ်ခဲ့သည် အနည်းဆုံး 5-6 ရာစုဘီစီ။
Taranatha, 17 ရာစုတိဘက်လားမားခြင်း, 3rd ရာစုဘီစီ Mauryan နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဧကရာဇ်ကဖော်ပြသည်, Ashoka, သာရိပုတြာရဲ့ chaitya ၏ထို site မှာနာလန်ဒါမှာကြီးမြတ်သည်ဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်ကြ၏။ ထို့အပြင်သူသည်ယခင်စအဖွဲ့အစည်း၏ဦးတည်သွားနှင့်အတူနာလန်ဒါမှာလိုမျိုးမဟာယာနအတွေးအခေါ်ပညာရှင်, Nagarjuna နှင့်သူ၏တပည့်, Aryadeva အဖြစ် 3rd ရာစုအေဒီသြဇာရှိသူများနေရာယူထားလေရဲ့။ Taranatha စ Suvishnu တည်နေရာမှာ 108 ဘုရားကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်းအမည်ဖြင့်မှည့ Nagarjuna ၏ခေတ်ပြိုင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီနာလန်ဒါမှာဗုဒ္ဓဘာသာများအတွက်လျင်မြန်စွာတိုးတက်စင်တာ 3rd ရာစုမတိုင်ခင်ကရှိ၏သည်ဟုပြန်ဆိုကြသည်နိုင်ကြသော်လည်း, မရှိရှေးဟောင်းသုတေသနအထောက်အထားများပြောဆိုချက်ထောက်ပံ့ဖို့ကိုတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ Faxian, အစောပိုင်းတရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားဖူး, Nalo, သာရိပုတြာရဲ့ parinibbana ၏ site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ, 5th ရာစုအေဒီ၏အလှည့်မှာသူ ဖော်ပြ. တန်ဖိုးရှိတွေ့ရှိအပေါင်းတို့သည်စေတီတော်ကိုခဲ့သည်။
Baladitya ခြင်း, Mahayanist ဒဿနပညာရှင်, Vasubandhu ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်မှဆောင်ခဲ့ခဲ့သည်။ သူသည်, Xuanzang အတိုင်း, “ဟုအဆိုပါဗောဓိပင်အောက်၌တည်ဆောက်ထားကြီးမြတ် Vihara“ နဲ့ဆင်ပြီးသောအတွင်းဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်နှင့်အတူမြင့်မား Vihara နာလန်ဒါမှာ sangharama တည်ဆောက်လည်း 300 ပေ (91 မီတာ) ။ ထိုဘုန်းတော်ကြီးလည်းတစ်ဦး sangharama ဆောက်သော Baladitya ရဲ့သား, Vajra, “ယုံကြည်ခြင်းအတွက်တစ်ဦးနှလုံးကုမ္ပဏီသိမ်းယူ“ ကမှတ်ချက်ချသည်။
ထို Mahavihara အရှိဆုံးမှတ်သားဖွယ်နာယကတစ်ဦးကိုပြောင်းလဲလိုက်ဗုဒ္ဓဘာသာသူ Harsha, Kannauj ၏ 7th ရာစုဧကရာဇ်ပင်ဖြစ်ပြီး, မိမိကိုမိမိနာလန်ဒါ၏ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ကျွန်ဆင်ခြင်၏။ Harsha အ Mahavihara အတွင်းကြေးဝါဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဆောက်နှင့် 100 မှကျေးရွာများ၏အခွန်ပို့စေ၏။ သူကအစနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာဆန်, ထောပတ်, နို့နှင့်တက္ကသိုလ်ပမာဏသာနှင့်အတူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘုန်းကြီးများကိုထောက်ပံ့ဖို့အဲဒီရွာတွေက 200 အိမ်ထောင်စုများကညွှန်ကြားခဲ့သည်။ အထောင်အသောင်းဝန်းကျင်နာလန်ဒါမှဘုန်းကြီးများ Kannuaj မှာ Harsha ရဲ့တော်ဝင်ပရိသတ်စည်းဝေးမှာစည်းဝေးကြ၏။
နာလန်ဒါတစ်ဦးလူနေအိမ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်, ဆိုလိုသည်မှာကကျောင်းသားတွေအတွက်နေထိုင်ရာတန်းလျားရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏ heyday မှာ, 10000 ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ဆရာမပေါင်း 2,000 ကျော်နေကြဖို့ပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။
နာလန်ဒါမှာဆုံးမဩဝါဒပေးဘာသာရပ်များလေ့လာသင်ယူမှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုလယ်ဖုံးအုပ်လျက်, ကိုရီးယား, ဂျပန်, တရုတ်, တိဘက်, အင်ဒိုနီးရှား, ပါရှားနှင့်တူရကီနိုင်ငံတို့မှကျောင်းသားများကိုနှင့်ပညာရှင်များ၏ဆွဲဆောင်
Avalokiteśvara Bodhisattva ။ နာလန်ဒါ ’s ပုလဲကာလမှAṣṭasāhasrikāPrajñāpāramitāသုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ Mahavihara ရေတွင်းတစ်တွင်းတပ်ဆင်ထားတဲ့စာကြည့်တိုက်ကိုတင်ဆက်ခဲ့ကြရပါမည်အကြောင်း, Yijing နာလန်ဒါမှာသူ့ရဲ့ 10 နှစ်နေအိမ်သို့ပြီးနောက်သူနှင့်အတူပြန်ယူသွားကြောင်းကျမ်းကြီးများနံပါတ်များမှအထင်အရှားဖြစ်သည်။ အစဉ်အလာတိဘက်သတင်းရပ်ကွက်များနာလန်ဒါမှာကြီးမြတ်စာကြည့်တိုက်၏တည်ရှိမှု Jewel-ဆင်ယင် (သုံးကြီးမားတဲ့ Multi-ထပ်ဆောင်အဆောက်အဦးများဖွဲ့စည်းသော Dhammaganja (ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်း Mart) သည် Ratnasagara (Jewel ၏သမုဒ္ဒရာ) သည် Ratnodadhi (Jewel ၏ပင်လယ်), နှင့် Ratnaranjaka အမည်ဖြင့်မှည့ဖော်ပြထားခြင်း ) ။ Ratnodadhi ကိုးထပ်မြင့်ခဲ့သည်နှင့် Prajnaparamita သုတ်နှင့် Guhyasamaja အပါအဝင်အများစုမှာသန့်ရှင်းသောလက်ရေးစာမူထည့်
ဒါဟာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာအတွက်ဖြစ်ရပြီမှခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အဆိုပါစာကြည့်တိုက်ကိုဘာသာရေးလက်ရေးစာမူစုဆောင်းကောက်ယူဒါပေမယ့်လည်းသဒ္ဒါ, ယုတ္တိဗေဒ, စာပေ, နက္ခတ်ဗေဒင်, နက္ခတ္တဗေဒနှင့်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောဘာသာရပ်များအပေါ်စာသားများမသာ။ အဆိုပါနာလန်ဒါစာကြည့်တိုက်ဖြစ်နိုင်သည်စာသားခွဲခြားအစီအစဉ်အပေါ် အခြေခံ. ခဲ့သည့်တစ်ဦးခွဲခြားအစီအစဉ်အခဲ့ကြရပေမည်။
ထို Vinaya, သုတ်နှင့်အဘိဓမ္မာ: ဗုဒ္ဓဘာသာစာသားများအများဆုံးအလားအလာ Tipitaka ရဲ့သုံးအဓိကကွဲပြားခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးသုံးအတန်း ခွဲ. ခဲ့ကြ
ဗုဒ္ဓမုနိသို့မဟုတ် Bodhisattva Maitreya, Gilt ကြေးနီသတ္တုစပ်, အစောပိုင်း 8 ရာစုတွင်, နာလန်ဒါ
သဒ္ဒါစည်းမျဉ်း, ယုတ္တိဗေဒ, စာပေ, နက္ခတ္တဗေဒ, ဆေးပညာနှင့်။
ဗုဒ္ဓဘာသာလေ့လာမှုများ, အတွေးအခေါ်တွေ, နှိုင်းယှဉ်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ, သမိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုကျောင်းမှ, နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကျောင်း, စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်း, ဘာသာစကားများနှင့်စာပေကျောင်းမှ, နှင့်, Ecology နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာရေးကျောင်း။
ထို့နောက်ရရှိနိုင်သောကမ္ဘာ့အသိပညာ၏ … လုနီးပါးတစ်ခုလုံးကိုအကွာအဝေး။ သင်တန်းများနိုင်ငံခြားနဲ့ဇာတိ, လေ့လာသင်ယူမှု, ဗုဒ္ဓဘာသာ, သန့်ရှင်းသောနဲ့လောက (မသန်စွမ်းနှင့် Apara) ၏တိုင်းနယ်ပယ်မှရေးဆွဲခဲ့သည်။ ပါဠိ၏လေ့လာမှုမသင်မနေရခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ပါဝင်သည့်ငါးနှစ်ပိုမသင်မနေရဘာသာရပ်ရှိခဲ့သည်: Shabda Vidya (; မဟုတ်ရင်သဒ္ဒါနှင့် Lexicography ဟုခေါ်သည့်အသံနှင့်စကားများသိပ္ပံ), Shilpasthana Vidya (ဝိဇ္ဇာနှင့် Crafts), Chikitsa Vidya (ဆေးပညာသိပ္ပံ), Hetu Vidya (Logic), နှင့် Adhyatma Vidya (ဒဿနိကဗေဒ) ။
အခမဲ့အွန်လိုင်း E-နာလန်ဒါသုတေသနနှင့်လေ့ကျင့် UNIVERSITY ကဘာလဲ?
နာလန်ဒါ၎င်း၏ဘုန်းအသရေကိုပြန်လည်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါက, ရုံ၎င်း၏နောင်တော်တူ ‘’ Monument ရှေ့သို့ ‘’ ဟာသူ့ရဲ့အချိန်ဖြစ်ရပါမည်။ ပို. အရေးကြီးသည့်အချက်မှာထိုသို့ရည်ရွယ်ချက်၎င်း၏သဘောကိုမောင်းရန်၎င်း၏အမာခံသူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာသွန်သင်ချက်များနှင့်စံပြအခြေအနေတစ်ရပ်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာရှေ့ကို၎င်း၏အချိန်ဤမျှအခြေခံကျကျတစ်ဦးသည်ရှေးခေတ်သင်ကြားရေးစူးစမ်းနိုင်နှင့်ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာ၏ tools တွေသုံးပြီးစုပေါင်း undreamed ဖန်တီးရန်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်သိပ္ပံနှင့်စိတ်ကိုလေ့လာမှုများရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးဘယ်မှာတစ်ခုနှစ်အရွယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာက၎င်း၏စိတ်ကူးများ, ဒဿနနှင့်အခြေခံမူများကိုပညာရေးတွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအမျိုးသားအပေါင်းတို့ဘွေ၌ကအဓိကလွှမ်းမိုးမှုကစားနိုင်မည့်အနေအထားဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ပို. ပင် - - အ Gupta ခေတ်တွင်ရှိရင်းစွဲလစ်ဘရယ်ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာရဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက်အကြံအစည်နှင့်စိတ်ကူးများကိုအင်တာနက်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်စီးဆင်းမှုကိုကျေးဇူးတင်ဒီခေတ်ကအလားတူပေးသည်။
အသစ်အအခမဲ့အွန်လိုင်း E-နာလန်ဒါသုတေသနနှင့်လေ့ကျင့် UNIVERSITY ကိုဘယ်လိုခြားနားသလဲ? ဒီနေရာမှာကိုရှာဖွေစူးစမ်းတန်ဖိုးရှိအချို့အတွေးအခေါ်များဖြစ်ကြ၏။
မူရင်းကိုနာလန်ဒါ၎င်း၏မသင်မနေရဘာသာရပ်၏တစ်ဦးအဖြစ်ဆေးဝါးရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအခမဲ့အွန်လိုင်း E-နာလန်ဒါသုတေသနနှင့်လေ့ကျင့် UNIVERSITY သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဌာနေ Siddha, တိဘကျ, အိန္ဒိယ (Ayurveda), တရုတ်, ရှန်း (Unani), နှင့်ဂရိတို့၏စုပေါင်းစုပ်လွှမ်းခြုံသောအာရှရိုးရာဆေးဝါးဆိုင်ရာစနစ်များ၏ကျယ်ပြန့် trove နေရာပေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။ မသိမိုက်မဲမှု, ပူးတွဲမှုနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်: အားလုံးနာမကျန်းနောက်ဆုံးမှာစိတ်သုံးခုကအဆိပ်မှရလဒ်များကအစဉ်အလာဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်ချက်ကူးပြောင်းသောတိဘက်ဆေးကုသမှုစနစ်, မှဆင်းသက်လာအဖြစ်ကြောင့် template ကိုသုံးလိမ့်မည်။ တိဘက်ဆေးပညာဒုက္ခဆင်းရဲဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖြေရှာတဲ့ယုတ္တိဗေဒလျှောက်ထားသောဗုဒ္ဓရဲ့လေး Noble အမှန်တရားအောက်ပါအတိုင်း။ ခေတ်သစ်ဆေးပညာသုတေသနနှင့်အတူတိုင်းရင်းဆေး synthesizing အားဖြင့်, ဒီဆရာဆရာမတစ်ဦးကိုဖြတ်တောက်အစွန်းဆေးဝါးနှင့်ဆေးဝါး Research Institute ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောစနစ်၏သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုအဓိကအားကြောင့်မော်လီကျူးဆိုင်ရာဇီဝဗေဒ, လျှပ်စစ်ဇီဝကမ္မဗေဒ, နှင့်ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာမှ neuroscience တိုးတက်လာရန်, သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ neuroscience ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအားထုတ်ပံ့ပိုးမှုများပိုမိုလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းလာခဲ့သည်နှင့်များစွာသောသုတေသနအသစ် (သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဥာဏ်အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု) အသိစိတ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်, အကြံအစည်ပေါ် လာ. မည်သို့ပြုလုပ်ပေးဦးနှောက်အလုပ်လုပ်ပုံပေါ်အသစ်သက်သေအထောက်အထားထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ နဲ့ non-ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် (anatta) ၏အယူအဆအတွက်မှ neuroscience သီအိုရီနှင့်ရှိခဲ့ခြင်းကိုမကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်, စကားပြောမရှိပါဗဟိုကားမောင်းသူ, ထိုလူအပေါင်းတို့ဆုံးဖြတ်ချက်များဖန်ဆင်းတော်မူသောအဘယ်သူမျှမမပြောင်းလဲတဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမရှိကြောင်းသက်သေအထောက်အထားထုတ်ပြန်ဖို့စတင်ဖွင့်ထားသည်။ ရလဒ်များကိုပိုမိုမွောဖြစ်လာကြသောအခါအမှန်စင်စစ်, မှ neuroscience ၏လယ်ပြင်ထိုကဲ့သို့သောဓာတုဗေဒ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, အင်ဂျင်နီယာ, ဘာသာဗေဒ, သင်္ချာဘာသာရပ်, ဆေးပညာ, ဒဿန, ရူပဗေဒနှင့်စိတ်ပညာအဖြစ်အခြားနယ်ပယ်နှင့်အတူပူးပေါင်းအရေးပါသောမဟာမိတ်ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ In-depth ကိုဆက်လက်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအားထုတ်အတွက်သုတေသနနှင့်လေ့လာမှုများဒီ field ရဲ့လျင်မြန်စွာတိုးတက်မှမြင်ရလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Madhyamika ဒဿနပညာရှင်သောအတူတကွအဖြစ်မှန်ရဲ့အဆုံးစွန်သဘောသဘာဝသို့ထိုးဖောက်တရားအားထုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်အတူဒဿနခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတစ်ဦးကိုတိကျခိုင်မာစွာနှင့်ဘရိတ်ဓားလိုထက်သောနည်းလမ်းကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အနတ္တ (sunyata) သည် Madhyamaka အားဖြင့် propounded သော core ကိုအမြင်, ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်သီးခြားလွတ်လပ်သည့် entity ကိုအဖြစ်သာတည်ရှိသောစကြဝဠာ၌အဘယ်အရာမျှမရှိပါကြောင်းထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းကွမ်တမ်ရူပဗေဒထွန်းသည်အထိအနောက်တိုင်းသိပ္ပံတက်အားဖြင့်ထင်သကဲ့သို့အလျှင်းမအဖြစ်မှန်၏အပြည့်အဝလွတ်လပ်သော feature ကိုအဖြစ်တည်ရှိကြောင်းကိုအောက်ပါအတိုင်း။ အမှန်စင်စစ်အနတ္တတစ်ဦးနားလည်မှုကိုကွမ်တမ်အနက်ပြဿနာတွေပေါ်သို့အသစ်ရှုထောင့်ပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ကွမ်တမ်စက်ပြင်နှစ်ဦးစလုံးသည်စကြဝဠာကိုသူသို့မဟုတ်သူမကသူတို့ငါးပါးနှင့်အတူရှိမှခံစားသိမြင်ကြောင်းနှင့်ထိုအရာအားလုံးတချို့လမ်းအတွက်ချိတ်ဆက်သလဲဆိုတာမဖြစ်ကြောင်းကိုသာဓကပြရလျှင်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွေးထဲတွင် “ရူပဗေဒ“ ပါရာဒိုင်းတစ်ဦးနှင့်အလေးအနက်ကိုတိကျခိုင်မာစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလာမယ့်၌ကြာမြင့်စွာရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့သော “အမှုန်ရူပဗေဒ ‘၏မူလတန်းဤသို့စွပ်စွဲအဖြစ် Indo-တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာနည်းစနစ်များ၏အချို့သောကဏ္ဍများနှင့်အတူခေတ်မီစက်ပြင်ကွမ်တမ်အကြားဟောပြောချက်များကို၏ရေးဆွဲရေး, စုပေါင်းသစ်ကိုဦးဆောင်ဦးရွက်ပုံစံလိမ့်မယ်။ အဘယ်သူသည်ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်, ထိုသို့သော, ကျောင်းသားများကထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ကိုချက်ချင်းဆိုသလိုဆက်သွယ်ရေးအဖြစ်အသုံးဝင်သော applications များ, ကွမ်တမ်တယ်လီပို့, ကွမ်တမ်ကွန်ပျူတာများတွေ့စေခြင်းငှါအရာလက်တွေ့ကျတဲ့အပေါ်သို့ထိ မိ. လဲစေခြင်းငှါ, “အဘယ်သို့သောကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်က” “အဘယ်သို့သောစကြဝဠာဖြစ်ပါတယ်” နှင့်အမျှကြီးမားသောမေးခွန်းတွေပုံစံကိုရှာဖွေအဖြေကိုသိတယ် စွမ်းအင်ကိုရိတ်နှင့်ကွမ်တမ် tunneling ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ Tipitaka စိတ်ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်း, ဒဿနသွန်သင်ချက်တွေနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်များကိုတစ်အများကြီးကြွယ်ဝသောအဘိဓာန်တွင်ပါရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ထိုသို့အများကြီး၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်ကိုမဂ္ဂဇင်းမှာအတွက်အခက်အခဲကြောင့်သာမန်လူတန်းစားတပိုင်တနိုင်ဖြစ်ကြ၏။ အဓိပ္ပါယ်ရှိသောရှာဖွေမှုနားလည်မှုကိုသူတို့ရဲ့အဆင့်အတိုင်းအသုံးပြုသူများ၏လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် Informatics ၏သိပ္ပံ, အတုထောက်လှမ်းရေး, smart algorithms တွင်သုံးပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းရပ်ကွက်များနှင့်ကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးဆဲတစ်ကဏ္ဍမှပါနိုင်ပါတယ်။ လက်တွေ့အသုံးဝင်သောဖြစ်သို့သော်ထိုကဲ့သို့သော system သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်နဲ့ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအများပြည်သူလွတ်လပ်စွာရရှိစေရမည်။ အပြင်ကနေ, နာလန်ဒါ nano နည်းပညာနည်းပညာသုတေသနအပေါ်အလေးအနက်, ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်အတွက်အဆင့်မြင့်သင်တန်းများပူဇော်ပါမည်။ ဒီနေရာမှာဖွံ့ဖြိုးပြီး Tools ကိုမှ neuroscience နှင့်ကွမ်တမ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနတွင်အထောက်အပံ့ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာပညာ၏ပင်ကိုခွဲခြားကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏သဘောသဘာ Algorithm ကိုအသုံးပြုပြီးသို့ကိုက်ညီ, ဤပေါင်းစပ်ဒီရှိသမျှသည်အခြားသောဌာနများ၌ကျောက်ချရပ်နားန်ဆောင်မှုများပေးအရေးပါသောဦးစီးဌာနဖြစ်စေလိမ့်မည်။
သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေမရှိခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးကြောင့်ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့်ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးကျန်းမာရေးဤကမ္ဘာတွင်အဓိကပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်သင်တန်းများနဲ့သနားကရုဏာကရုဏာ၏သွန်သင်ချက်ကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့မှန်လျှင်ဤဒေသကဖြစ်လိမ့်မည်။ စွမ်းအင်နှင့်အာရုံစိုက်မှုရေကောင်းရေသန့် filtering ကိုအဘို့အအော်ဂဲနစ်ပရိုတိန်းထုတ်လုပ်မှုတွင်သုတေသန၏ဧရိယာ, အာဟာရ vegan အစားအစာများ၏စျေးပေါအပြောင်းအလဲနဲ့မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားသောအစားအစာများ (vegan အမျိုးမျိုး) နှင့်အမြှေးပါးနည်းပညာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သင့်ပါသည်။ ကိုရီးယားမှတရုတ်, အိန္ဒိယမှအာရှ vegan အစားအစာများအတွက်လက်ဝါးကားတိုင်ကိုစမ်းသပ်ချက်, ဆင်ဟာလီနှင့်ထိုင်းအစားအစာများကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ Fusion ကိုထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောသုတေသနလုပ်ငန်း (အကြမ်းမဖက်) ‘ahimsa‘ ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်အရာ၌ခန့်ထားခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်, လေးစားခြင်းနှင့်အာရုံခံစားနိုင်စွမ်းအသက်တာ၏ Non-အန္တရာယ်ပထမဦးဆုံးပညတ်နှင့်အတူစောင့်ရှောက်ရန်အရေးကြီးသည်ဆိုတာဘာလဲ။
သုတေသနလုပ်ငန်းဒေသများတွင်ကိုချိုးဖောက်မြေပြင်သို့သွားသည်နှင့်အမျှသူတို့ပိုင်အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များနှင့်အကျိုးစီးပွားအုပ်စုများမည့်အလားအလာများကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ကျင့်ဝတ်လိုင်းပေါ်မှာစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။ bioethics ၏လေ့လာမှုတစ်ခုဒြေသုတေသန၏အခြားနယ်ပယ်မှတွဲဖက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ non-အကြမ်းဖက်မှုများကို (ahimsa) ၏အခြေခံမူများနှင့်အညီအဆင့်မြှင့်ထားခြင်း (Metta) ကရုဏာနဲ့သနားကရုဏာ (ကရုဏာ), ၎င်း၏ရေးဆွဲရေးထို့ကြောင့်တစ်ဦး “ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူ့ကျင့်ဝတ်,” တစ်စည်းကမ်းထုတ်လုပ်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောသက်ရှိများရှင်သန်ဆီသို့ဦးတည်စည်းလုံးညီညွတ်မှုအဖြစ်ကျယ်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်ဝန်းရံနိုင် ဇီဝဗေဒ, ဂေဟစနစ်, ဆေးဝါးနှင့်လူ့တန်ဖိုးများအကြား link တစ်ခုကိုယ်စားပြုသောလူသားတွေနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်နှစ်ခုလုံး၏ရှင်သန်မှုမှီနိုင်ဖို့အတွက်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဒဿန, အကြံဥာဏ်များနှင့်တရားအားထုတ်ခြင်းအလေ့အကျင့်နဲ့ပေါင်းစပ် bold ဗျာဒိတ်ရူပါရုံနှင့်ဖန်တီးမှုလိုက်စားလူ့တီထွင်မှုနှင့်မြင့်မားသောယဉ်ကျေးမှု၏အချက်ပြမီးသဖွယ်သို့အခမဲ့အွန်လိုင်း E-နာလန်ဒါတက္ကသိုလ်မှသုတေသနနှင့်လေ့ကျင့် remake မည်။ အစွန်းရောက်တွေးခေါ်ရှိခြင်း၎င်း၏နောင်တော်, လိုပဲ, နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာအကြံအစည်အတွက်ကျောင်းပညာဆည်းပူးခဲ့သည့်ဆန်းသစ်သောဆရာများစိတ်ထဲတွင်လေ့လာမှုများအတွက်အစွန်းသုတေသနလုပ်ငန်းဖြတ်တောက်၏ဝတ်လုံကို ကောက်. ယူက enable လုပ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာပွင့်လင်းလုံလောက်တဲ့စိတ်ဖြင့်ဤမြေကွက်၌တစ်ဦးမတူနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးထိုသို့သောဒလိုင်းလားမား, Goenka, Thich nhat Hahn, ရဟန်းဗောဓိ, Ajahn Brahm, Thanissaro ရဟန်း, ဂျက်ကွန်းဖီးလ်, ယောသပ်စတိန်း, ရောဘတ်ကဲ့သို့ကြီးနေထိုင်သောဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ထဲတွင်၏ပါဝင်မှုရှာကြလိမ့်မည် Thurman, Ven Cheng တို့ယန်း, Ven ။ Kashyap bhante, Ven ။ Mahabodhi Society ၏အာနန္ဒာ Bhante, Ven.Vinayarakkhita Bhamte, အခမဲ့အွန်လိုင်း E-နာလန်ဒါတက္ကသိုလ်မှသုတေသနနှင့်လေ့ကျင့်၏ဂတိရှိသည်အတိုင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသင်ကြားရေးနှင့်သုတေသနဌာနအဖြစ်ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ကြလိမ့်မည်။
၎င်း၏ဘုန်းကြီးသောနာမတော်လက်ရှိလိုအပ်ချက်များနှင့်တေးသွားကိုအတွက်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်များအတွက်အသိပညာပေးလမ်းညွှန်နှင့်အတူနိုးထဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ထိုအဖြစ်ပျက်သည်ကို, ဗုဒ္ဓဘာသာဟာသူ့ရဲ့အဓိက၏ဗဟိုနှင့်၎င်း၏ညာဏ၏တည်ရှိမှုကားမောင်းသူမှာဖြစ်လိမ့်မည်။
Sakalika သုတ်: အဆိုပါကျောက်ခေတ် Sliver
Cullavagga VII Devadatta, ဗုဒ္ဓ၏ဝမ်းကွဲ, ဗုဒ္ဓမှသံဃာ၏ခေါင်းဆောင်မှုလမ်းမှမလွှဲဖို့နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အောင်မမြင်ကြိုးစားခဲ့မည်သို့ပြောပြပါသည်။ CV VII.3.9 ခုနှစ်တွင်သူသည်တောင်ပေါ်ကဆင်းကျောက် hurling ခြင်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓကိုသတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ကျောက်ကိုကြေမွ, ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓ misses, ဒါပေမယ့်အသွေးအားဆွဲဗုဒ္ဓ၏ခြေကိုဖောက်နေတဲ့ splinter ထွက်ပို့ပေးနေပါတယ်။ ထိုဋီကာအလိုအရအတူတကွနှင့်အတူဤဟောပြောချက်သည်မိမိအသက်ကိုပေါ်မှာဤကြိုးပမ်းမှုမှဗုဒ္ဓရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဖော်ပြရန်။
ကျနော်တစ်ခါကမြတ်စွာဘုရားသည် Maddakucchi သမင်ဘေးမဲ့တောမှာ Rajagaha အနီးတည်းခိုခဲ့ကြားရကြပြီ။ အခုတော့အဲဒီအချိန်ကမိမိခြေမှာကျောက် sliver အားဖြင့်ထိုးဖောက်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ နာကျင်, ပြင်းစွာသောအချွန်ထက်, wracking, တွန်းလှန်, ဖွယ်သော - - Excruciating သူ့ကိုအတွင်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသောခန္ဓာကိုယ်ခံစားချက်များရှိပေမယ့်သူ, အောက်မေ့နိုးကြား, & unperturbed သူတို့ကိုကြံ့ကြံ့ခံ။ မိမိအအပြင်ဘက်သောဝတ်လုံကိုလေးခေါက်ထွက်ချထားခဲ့တော်မူပြီးလျှင်, အခြား & အောက်မေ့နိုးကြား၏ထိပ်ပေါ်မှာနေရာချစကာတဦးတည်းကိုခြေနှင့်တကွ, ခြင်္သေ့ကိုယ်ဟန်အနေအထား၌မိမိလက်ျာဘက်၌အိပ်လေ၏။
ထိုအခါ Satullapa retinue မှ 700 devatas, ညဉ့်ဝေးလံအစွန်းရောက်အတွက်, Maddakucchi ၏တခုလုံးကိုတက်ထွန်းကသူတို့အစွန်းရောက်အရောင်, မြတ်စွာဘုရားသည်ငှါသွားလေ၏။ ဆိုက်ရောက်တွင်ထိုသူအားနှိမ့်ချတော်မူပြီးမှ, သူတို့တစ်ခုသောရပ်နေကြ၏။
သူမထိုအရပ်၌ရပ်နေသောခဲ့သည်အတိုင်း, devatas တစ်ဦးသည်မင်္ဂလာ One ရဲ့အထံတော်၌ဤသို့ကွှေးကျွော: “တစ်ဦးသည် Naga ဂေါတမသည်စားဆင်ခြင်ထိုအခါနာဂတူ, ကိုယ်ထင်ရှားခံစားချက်များပေါ်ထွန်းသောအခါအဘယ်သို့ဖြစ် - နာကျင်, ပြင်းစွာသောအချွန်ထက်, wracking, တွန်းလှန်, ဖွယ်သော - သူ! သူတို့ကိုအောက်မေ့နိုးကြား, & unperturbed တည်သောကြောင့်,! “
! နာကျင်, ပြင်းစွာသောအချွန်ထက်, wracking, တွန်းလှန်, ဖွယ်သော - - သူအောက်မေ့, တပ်လှန့်သူတို့ကိုအမြဲတည်သောကြောင့်, & သည်ခြင်္သေ့ဂေါတမသည်စားဆင်ခြင်ထိုအခါခြင်္သေ့ကဲ့သို့, ကိုယ်ထင်ရှားခံစားချက်များပေါ်ထွန်းသောအခါအဘယ် “: ထိုအခါအခြား devata မြတ်စွာဘုရားသည်ရဲ့အထံတော်၌ဤသို့ကြွေးကြော်ခဲ့သည် unperturbed! “
! နာကျင်, ပြင်းစွာသောအချွန်ထက်, wracking, တွန်းလှန်, ဖွယ်သော - - သူအောက်မေ့, တပ်လှန့်သူတို့ကိုအမြဲတည်သောကြောင့်, & တစ်အာဇာနည်ဂေါတမသည်စားဆင်ခြင်ထိုအာဇာနည်တူ, ကိုယ်ထင်ရှားခံစားချက်များပေါ်ထွန်းသောအခါအဘယ် “: ထိုအခါအခြား devata မြတ်စွာဘုရားသည်ရဲ့အထံတော်၌ဤသို့ကြွေးကြော်ခဲ့သည် unperturbed! “
ထိုအခါအခြား devata မြတ်စွာဘုရားသည်ရဲ့အထံတော်၌ဤသို့ကွှေးကျွော: “ဘာ peerless သောနွားထီးတကောင်ဂေါတမကိုစားဆင်ခြင်ထိုအခါ peerless နွားကဲ့သို့, ကိုယ်ထင်ရှားခံစားချက်များပေါ်ထွန်းသောအခါဖြစ်ပါသည် - နာကျင်, ပြင်းစွာသောအချွန်ထက်, wracking, တွန်းလှန်, ဖွယ်သော - ထိုသူတို့အမြဲတည်သောကြောင့်အောက်မေ့, တပ်လှန့်! & unperturbed! “
ထိုအခါအခြား devata မြတ်စွာဘုရားသည်ရဲ့အထံတော်၌ဤသို့ကွှေးကျွော: “တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့သောဝန်ကို-လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဂေါတမကိုစားဆင်ခြင်ထိုအခါခိုင်မာနှောင့်ရှက်-လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများကဲ့သို့ကိုယ်ထင်ရှားခံစားချက်များပေါ်ထွန်းသောအခါအဘယ်သို့ဖြစ် - နာကျင်, ပြင်းစွာသောအချွန်ထက်, wracking, တွန်းလှန်, ဖွယ်သော - သူတည်သောကြောင့်, , အောက်မေ့နိုးကြား, & unperturbed သူတို့ကို! “
ထိုအခါအခြား devata မြတ်စွာဘုရားသည်ရဲ့အထံတော်၌ဤသို့ကွှေးကျွော: “တစ်ဦးနှိမ်နင်းနိုင်ပြီဟုယူဆရတစ်ဦးမှစားဆင်ခြင်ထိုအခါနှိမ်နင်းနိုင်ပြီဟုယူဆရတယောက်သည်, ကိုယ်ထင်ရှားခံစားချက်များပေါ်ထွန်းသောအခါတူဂေါတမသည်အဘယ်သို့ - နာကျင်, ပြင်းစွာသောအချွန်ထက်, wracking, တွန်းလှန်, ဖွယ်သော - ထိုသူတို့အမြဲတည်သောကြောင့်အောက်မေ့, တပ်လှန့်! & unperturbed! “
ထိုအခါအခြား devata မြတ်စွာဘုရားသည်ရဲ့အထံတော်၌ဤသို့ကွှေးကျွော: “ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းစွာထုတ်လွှတ်စိတ်ကိုကြည့်ရှုပါ - ဆင်းညှစ်မျှမပြန်အတင်းအဓမ္မမပြု, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ကြံနှင့်အတူပိတ်ဆို့ခံရသို့မဟုတ်နှိမ်နင်းကိုစောင့်ရှောက်သည်လူမျိုးတစ်ဦးနာဂထင်မယ်လို့သူမည်သည်ကား။ , လူ, လူအာဇာနည်, လူ peerless သောနွားထီးတကောင်, လူအားကြီးသောနှောင့်ရှက်-လေယာဉ်တင်သင်္ဘော၏ခြင်္သေ့ထိုကဲ့သို့သောနှိမ်နင်းနိုင်ပြီဟုယူဆရသည်လူကိုချိုးဖောက်သင့်သည်: နောက်ထပ်ဘာ blindness လျှင်သည်မဟုတ် “?
ငါး Veda Brahmans, 100 နှစ်ကြာ Austers နေထိုင်သော: သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုမှန်ကန်စွာဖြန့်ချိကြသည်မဟုတ်။ နှိမ့်ချသဘာဝအားဖြင့်, သူတို့ ကျော်လွန်. ပြီမဟုတ်ပါဘူး။ တပ်မက်ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါပြီ, 100 နှစ်ကြာငြိုငြင် Austers ဖျော်ဖြေ, ဥပဒေသများကို & အလေ့အကျင့်ရှိတက်ကိုချည်နှောင်: သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုမှန်ကန်စွာဖြန့်ချိကြသည်မဟုတ်။ နှိမ့်ချသဘာဝအားဖြင့်, သူတို့ ကျော်လွန်. ပြီမဟုတ်ပါဘူး။ ထင်တဦးနှင့်ပတ်သက်သောမြတ်နိုးဖွယ်အဘို့အဘယ်သူမျှမနေယဉ်ရှိတယ်, uncentered တယောက်ကိုမျှမ sagacity ။ တောလွင်ပြင်၌တစ်ဦးတည်းသော်လည်းတ heedlessly နေထိုင်သောလျှင်, တမာရ်နတ်၏တော့ဘူးတဘက်, ကူးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လက်ျာအသိပညာနေရာတိုင်းအပြည့်အဝကိုတော၌တစ်ဦးတည်းဖြန့်ချိနှင့်အတူ heedfully နေထိုင်အတွင်းကောင်းစွာဗဟိုပြုသည်ဟုထင်, စွန့်ပစ်တော်မူပြီးမှ, တမာရ်နတ်၏တော့ဘူးတဘက်, ကူးမည်။
နယူးဒေလီ - အမေရိကန်သမ္မတဘရက်ခ်အိုဘားမားကနိုင်ငံ၏ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်နှင့်အတူအများအားဖြင့်အကောင်းမြင်ဆွေးနွေးပွဲ၏နှစ်ရက်ကြာပြီးနောက်သတိ၏မှတ်စုတစ်ခုဗလံဘာသာရေးလိုင်းများတလျှောက် splintered လျှင်အောင်မြင်ဖို့မဟုတ်ဘူးအင်္ဂါနေ့ကသတိပေးခဲ့သည်။
အိုဘားမားအဓိကအားဖြင့်နိုင်ငံ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဌာပနာကြောင့်ပြန်ခေါ်လူတိုင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းအများအားဖြင့်အိန္ဒိယလူငယ်တစ်ဦးကပရိသတ်ကိုကပြောသည်။ “Nowhere နိုင်ငံထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့, ဘယ်နေရာမှာကထောက်ပင့်စေခြင်းငှါကြောင်းအခြေခံအုတ်မြစ်တန်ဖိုးအတွက် ပို. လိုအပ်သောဖြစ်သွားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟုသူကပြောသည်။
“ဒီနိုင်ငံဟာဒီလောက်အချိန်ကြာမြင့်ပါကဘာသာရေးယုံကြည်ခြင်း၏လိုင်းများတလျှောက် splintered မပြုလုပ်အောင်မြင်မည်။ “
ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိစ္စဝန်ကြီးချုပ် Narendra မစ္စတာမိုဒီတစ်စိတ်အားထက်သန်စွာ Hindutva အမျိုးသားရေး၏ရွေးကောက်ပွဲပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတည်းကအထူးသဖြင့်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်သူပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိမီပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှိရာဂူထဲမှာအသေအနည်းဆုံးလူ 1000 ကျန်ကြွင်းရစ်သောမွတ်စလင်များအားအကြမ်းဖက်မှုအောက်ပါမစ္စတာမိုဒီနာမည်ပျက်စာရင်း။ မစ္စတာမိုဒီသည် Bharatiya Janata Party (BJP) ၏ခေါင်းဆောင်တဦး, မည်သည့်အမှားမဟုတ်ဟုငြင်းဆိုနှင့် theCountry ရဲ့တရားရုံးများအားလုံး charges.But ၏အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်သင်္ကာမကင်းတဲ့အမွေဆိုးကျန်ကြွင်းစေပြီတောင်းပန်ရန်အားမိမိငြင်းဆိုခဲ့ကိုထိန်းချုပ်ရန်သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှု၏ပျက်ကွက်သူ့ကိုရှင်းလင်းကြပါပြီ။
မစ္စတာမိုဒီစမှိုင်မှိုင်သူတို့ရဲ့ဘာသာတရားကို “ကာကွယ်စောင့်ရှောက်“ အနည်းဆုံးသားသမီးလေးယောက်ရှိသည်လတ်တလော hindutva မိန်းမတို့အဘို့ကိုခေါ်သူတစ်ဦး BJP အမတ်ဆန့်ကျင်ထွက်ပြောဆိုရန်ပျက်ကွက်မှုအတွက်ဝေဖန်နှင့် hindutvaism ရန် ‘re-င်း‘ ၏မကြာသေးမီက spate ထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့ကသူ့မိန့်ခွန်းတွင်သမ္မတအိုဘားမားကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒီနိုင်ငံရဲ့ “အကောင်းဆုံးမိတ်ဖက်” ရှိနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
အမေရိကန်သမ္မတကဝါရှင်တန်နှင့်နယူးဒေလီအကြားဆက်ဆံရေး “ဒီရာစုနှစ်ရဲ့ defining မိတ်ဖက်တဦးဖြစ်နိုင်သည်” ကိုလည်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်ဒါပေမယ့်တိုင်းပြည်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်အပြည့်အဝခဲ့မဟုတ်လျှင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုဆန့်ကျင်သည်စစ်တိုက်ကိန်းပေါ်ပြီးသားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါမိန့်ခွန်းသမ္မတအိုဘားမားနှင့်ဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာမိုဒီ Narendra အကြားအသစ်တခု “ချစ်ကြည်ရေး“ ကြေညာစာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးအပါအဝင်တစ်ဦးကိုမကြာခဏနှောင့်ရှက်သောဆက်ဆံရေးအတွက်အံ့သြဖွယ် upturn ကိုမြင်ခဲ့ပြီဟုသောလူများပြည့်ကျပ်နေသောခရီးစဉ်၏ဇာတ်သိမ်းခဲ့သည်။
“ဒီနိုင်ငံနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရုံကသဘာဝမိတ်ဖက်မဟုတ် - ငါအမေရိကတိုက်ဒီနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖော်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်ပါတယ်” အိုဘားမားပတ်လည်မှာလူပေါင်း 1,500 ၏အုပ်စုတစုကနေသစ္စာ၏သစ္စာကိုကြိုဆိုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ကပြောပါတယ်။
“မှန်ပါတယ်, သာဒီတိုင်းပြည်ဟာကမ္ဘာ့အတွက်ဒီနိုင်ငံရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမနှစ်ဦးစလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးတို့ပိုမိုအလုပ်အကိုင်နှင့်အခွင့်အလမ်းကိုရလိမ့်မည်ဟုလုံးဝယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ကြောင်းကိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပါးအမျိုးသားပိုပြီးလုံခြုံမှုရှိလိမ့်မည်, ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးသည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအတူတကွမတ်တပ်ရပ်လိုက်တဲ့အခါကမ္ဘာကြီးဟာပိုမိုအန္တရာယ်ကင်းပြီးပိုမိုရုံရာအရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဒီနေရာမှာပေါ့။ “
တိုင်းပြည်နိုင်ငံခြားခေါင်းဆောင်အပေါ်မြှောက်နိုင်တဲ့အကြီးမားဆုံးဂုဏ်ထူးတဦး - သမ္မတအိုဘားမား၏မိန့်ခွန်းတွင်သူ၏ခရီးစဉ်၏နောက်ဆုံးထိတွေ့ဆက်ဆံမှု, တနင်္လာနေ့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံ Day ကိုချီတက်ပွဲမှာအကြီးအကဲဧည့်သည်အဖြစ်သူ၏တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးသော၏ဗဟို-piece ခဲ့သည်။
အိုဘားမားကသူနောက်ဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ဖြစ်လာမှနှစ်နိုင်ငံအများအတွက် 2010 ခုနှစ်သွားရောက်ကြည့်ရှုတော်မူသောအခါဖော်ပြရည်မှန်းချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန် “ကြယ် aligned နေကြတယ်“ ဟုပြောသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ “မဏ္ဍိုင်“ အရှေ့အရပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်မဟာမိတ်များ reinvigorate မှရှာဖွေနေသည်, မိမိယခင်ထက်တရုတ်ဆီသို့ဦးတည်မစ္စတာမိုဒီရဲ့ပိုအထက်စီးရပ်တည်ချက်မှတ်သားတော်မူပြီ။
အိုဘားမားလည်းအညွှန်း၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုထောက်ပင့်စေရမည်ဟုဆိုသည်။ “အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအညွှန်းရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုထောက်ပင့်စေရမည်နှင့်အငြင်းပွားမှုများကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းပေးရမည်ရှိရာအာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွက်တိုင်းပြည်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်သောအခန်းကဏ္ဍကိုကြိုဆိုသည်” ဟုသမ္မတအိုဘားမားကပြောပါတယ်။
သို့သော်သမ္မတအိုဘားမားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာကိုအပေါ်မှီခိုနေရခြင်းကိုလျှော့ချမဟုတ်လျှင်လောကီသား “ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဆန့်ကျင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရပ်တည်” မပါဘူးသတိပေးခဲ့သည်။ သမ္မတအိုဘားမား “ကျနော်ကအမေရိကန်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံများထက် ပို. ရာစုနှစ်တစ်ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တိုးတက်မှုနှုန်းစွမ်းအင်ကိုကူညီတူညီတဲ့ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာကိုပေါ်မှာသင့်ရဲ့မှီခိုမှုလျှော့ချရန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနှင့်ဤနိုင်ငံ၏တူထွန်းသစ်စစီးပွားရေးမေးရန်အဘို့အကမမျှတမယ့်အကြောင်း, အချို့ဖြင့်အငြင်းအခုံသိ“ ကပြောပါတယ်။ “ဒါပေမယ့်ဒီမှာအမှန်တရားကိုင်: ဤတိုင်းပြည်များကဲ့သို့ကြီးထွားလာနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလိုနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ပင်လျှင် - တစ်ဟုန်ထိုးစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကိုနှင့်အတူ - စသန့်ရှင်းရေးလောင်စာကိုပွေ့ဖက်ကြဘူး, ပြီးတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမခံမရပ်ကြဘူး။ “
ဒီနိုင်ငံကကိုယ်နှိုက်ကို 1.2 ဘီလီယံလူဦးရေရဲ့အများအပြားဆင်းရဲမွဲတေမှုတွင်နေထိုင်သည့်တိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်သည့်စံနှုန်းများမြှင့်ဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလျော့နည်းစေပစ်မှတ်ထားမည်မဟုတ်ကြောင်းငြင်းခုံ, ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာကြိုတင်ပြီးကကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုဆိုင်ရာထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချဖြတ်တောက်မှုတွင်အဓိကအား၎င်းကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်မှာ balked ခဲ့သည် ။
အကြမ်းဖက်သမားအကြမ်းဖက်, ကိုယ်ပျောက်, RSS ရဲ့ Bahuth Jiyadha Paapis ကြီးစိုးခြယ်လှယ်
(ဘီဂျေပီ) တွင်နှောင့်အယှက်ခံသောလိမ်လည်မှု EVMs နှင့်အတူ Master key ကြောင့်ယူသွားစေချင်သနည်း
ဒီမိုကရေစီအင်စတီကျူးလူသတ်မှု၏မျက်နှာသာ (မစ္စတာမိုဒီ) သူတို့နှင့်အတူ
နည်းပညာအလွဲသုံးစားတန်ခိုးတော်၏သဘောထားကလောဘကြီးမှုကြီးစိုးခြယ်လှယ်။ မုန်းတီးမှု, အမျက်ထွက်,
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်အတွက်ကုသမှုလုပ်စရာရူး။ RSS ကိုရဲ့ဘီဂျေပီယုံကြည်ဘယ်တော့မှမ
ဤအကြောင်းကြောင့်ရူး၏အခြားဘာသာတရားများ၏လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဤတိုင်းပြည်ရှိလူအားလုံးက single ပြိုင်ပွဲပိုင်သော်လည်း။ chitpawan ပုဏ္ဏားထိုသူတို့အ manusmriti.Rest နှုန်းအတိုင်းသူတို့ 1st နှုန်းမှာအသက်ဝိညာဉ်ကို (athmas) ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည် 1% 2nd, 3rd, 4th နှုန်းမှာအသက်ဝိညာဉ်ကိုဖြစ်ကြ၏။ ထိုအညစ်အကြေး (SC / STS) ကိုမအသက်ဝိညာဉ်ရှိခြင်း။ သူတို့အကြမ်းဖက်စတင်ခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်
သူတို့ကို။ ဗုဒ္ဓမဆိုအသက်ဝိညာဉ်ကိုယုံကြည်ကြဘူး။ သူကအားလုံးမျက်နှာညှိုးငယ်တန်းတူဖြစ်ကြ၏။ အဆိုပါ
သူတို့ရဲ့မူရင်းနေအိမ် Budhism မှ။ ဗုဒ္ဓဘာသာနည်းလမ်းများနှင့်အတူသူများနိုးထ
စအသိပညာနှင့်အတူသူများနိုးထ။ Scheduled ဇာတ်အပေါင်းတို့၏မိခင်ဖြစ်သည်
ဤတိုင်းပြည်တွင်အခြားစွန့်ပစ်, သူတို့လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် developer များဖြစ်ကြသည်ကတည်းက
Hindutva Vir Savarkar အားဖြင့်တူအခြား chitpawan ပုဏ္ဏားထုတ်လုပ်သောခဲ့သည်
RSS ကိုရဲ့ဘီဂျေပီသည်လူ။ ဒါဟာမဲဘဏ်ကိုဖန်တီးခြင်းကအာဏာကိုဖမ်းယူရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ယခု
CJI Sathasivam အခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့်အပြစ်စီရင်ရာသင်္ချိုင်းတွင်းကိုအမှားကျူးလွန်
လိမ်လည်မှု EVMs မည့်အစားလုံးဝသူတို့ကိုအစားထိုး၏အဆင့်အတွက်အစားထိုးရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါထွဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Sampath ကုန်ကျစရိတ်ကိုကိုးကားပြီးအဆင့်မှာသူတို့ကိုအစားထိုးဖို့အကြံပြု
ရူပီး 1600 လုံးဝသူတို့ကိုအစားထိုးဖို့ကုဋေ။ သို့သော်ဤမျက်နှာသာပေးရန်သာဖြစ်သည်
နောက်ကျော hindutva မှ reconvert မှ RSS ကိုရဲ့ဘီဂျေပီ။ ထို chitpawan ပုဏ္ဏားအတော်များများ
အသင်းတော်အပေါင်းတို့ကို, ဆေးရုံများ, ပညာရေးအင်စတီကျူးနေစဉ်ကျော်ယူ
untouchability.They လေ့ကျင့်အဲဒီ chitpawans reconvert မည်မဟုတ်
တန်တိုင်း။ သူကတခြား chitpawan ပုဏ္ဏားခဲ့သည်။ အခုတော့ chitpawan ပုဏ္ဏား
ဒီလူသတ်များအတွက်ရုပ်ပွားတော်နှင့်ဘုရားကျောင်း erecting များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုချထားပြီ
နေသမျှကာလပတ်လုံးရွေးကောက်ပွဲလိမ်လည်မှု EVMs နှင့်အတူပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်သကဲ့သို့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းများ (မစ္စတာမိုဒီ) ၏သာလျှင်သတ်တတ်မြက်ပင်ရက်အတွင်းလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုအရာကြွင်းလေသမျှသောအနစ်မြုပ်သင်္ဘော၌ဖြစ်ကြ၏။ နည်းပညာဒီမိုကရေစီပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာဌာပနာလွတ်လပ်မှု, ကြားတွင်နဲ့တန်းတူညီမျှ။ EVMs လုံခြုံမှုမရှိဘူး။ သူတို့ကိုအပိုင်းအစ။ လတ်ဆတ်တဲ့လော့ခ်ဆာဘား Order
ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုကယ်တင်ဤ EVMs နှင့်အတူပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ရှိသမျှကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများကို။ နိုင်ငံရေးမှာအခုကျွန်တော်တို့တန်းတူညီမျှမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့နှင့်လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတွင်, လိမ်လည်မှု EVMs ယောက်ျားတယောက်ကိုတတန်ဖိုးကို၏နိယာမငြင်းပယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ contradictions.Fraud EVMs ၏ယခုဘဝ၌အကြှနျုပျတို့၏အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရသည့်နိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီချပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးဘဝအတွက်တန်းတူရေးကိုငြင်းပယ်ဆက်အသက်ရှင်။ မညီမျှမှုကနေဆင်းရဲခံရသူများသည်ထို Constituent Assembly ဒါကြောင့်ပင်ပန်းတည်ဆောက်ထားသည့်ဒီမိုကရေစီ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုတက်မှုတ်မည်ကိုအခြားအစောဆုံးဖြစ်နိုင်အခိုက်မှာဒီလိမ်လည်မှု EVMs ဖယ်ရှားပါ။
အမှုအရာကြောင့်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းများ (မစ္စတာမိုဒီ) ၏ဦးကိုသတ်မူလိမ်လည်မှု EVMs မှတဆင့် Master key ကြောင့်ယူသွားစေချင်သနည်းဟုမိမိတို့ Dominic သဘောထား 1% chitpawan ပုဏ္ဏားအကြမ်းဖက်စစ်သွေးကြွ, ကိုယ်ပျောက်အကြမ်းဖက်တဲ့ RSS ရဲ့ Bahuth Jiyada paapi (ဘီဂျေပီ) အရမှားပါပွီ။ အကြောင်းပြချက်ကျွန်တော်တို့ဟာမကောင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိသည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောရရှိသည် chitpawan RSS ကိုညစ်ညူးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခုတိုင်းနိုင်ငံတခုမျှကဖန်တီးသေးပေ, လောကီသားအစစ်အမှန်သဘောရှိ၏။ ကျနော်တို့လူမျိုးဖြစ်ကြ၏ယုံကြည်သောကျနော်တို့ကကြီးမြတ်မောဟ cherishing ကြသည်။ ကိုမည်သို့စွန့်ပစ်ရာတစ်ထောင် ခွဲ. လူတမျိုးကိုရနိုင်သနည်း ရှိရာသို့အလျင်အမြန်ငါတို့သည်ကမ္ဘာ၏လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောမျိုး, ငါတို့အဘို့ပိုကောင်းအတွက်, သေးသောလူမျိုးမဟုတ်သဘောပေါက်လာတယ်။
လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာသေချာပါတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၏ကိစ္စသာဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလွတ်လပ်ရေးကျွန်တော်တို့ကို သာ. ကြီးမြတ်သောတာဝန်များပစ်ချတော်မူကြောင်းကိုမေ့လျော့တော်မကြကုန်အံ့။ လွတ်လပ်ရေးအားဖြင့်ငါတို့သည်တစုံတခုကိုမျှမှားသွားဘို့အဗြိတိသျှတို့အပြစ်တင်၏ဆင်ခြေဆင်လက်ပျောက်ဆုံးကြပါပြီ။ နောက်မှအရာကမှားသွားလျှင်, ငါတို့သည် chitpawan တဲ့ RSS ရဲ့ဘီဂျေပီ မှလွဲ. အပြစ်တင်ဖို့ဘယ်သူမှလိမ့်မည်။ မှားနေမှုအရာတို့ကို သာ. ကြီးမြတ်သောရာယ်ရှိပါတယ်။ တိုင်းမ်စ်အစာရှောင်ခြင်းပြောင်းလဲလာတဲ့ဖြစ်ကြ၏။
(1) နိုင်ငံရေး, ဒီမိုကရေစီပုံစံအိပ်ရန်နှင့်
(2) ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြစီးပွားရေးအရဒီမိုကရေစီနှင့်လည်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အာဏာအတွက်သမျှသောစီးပွားရေးဒီမိုကရေစီကိုဆောင်ကျဉ်းဖို့ကြိုးစားကြရကြလိမ့်မည်ညွှန်းကအိပ်ရန်။ သို့သော်လိမ်လည်မှု EVMs နှင့်အတူအာဏာမှလာသောကွန်ဂရက်နှင့် BJP နှစ်ခုလုံးကစီးပွားရေးဒီမိုကရေစီကိုဆောင်ကျဉ်းဖို့ကြိုးစားကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်ငါတို့စံပြစီးပွားရေးအရဒီမိုကရေစီကြောင်းအိပ်ဘို့ညွှန်ကြားစာအခြေခံမူကြီးစွာသောတန်ဖိုးရှိသည်။ “